Phezulu kwe-Café - Ifulethi elisha e-Baie-St-Paul - I-Airbnb
Phezulu kwe-Café - Ifulethi elisha e-Baie-St-Paul
Baie-Saint-Paul, Quebec, i-Canada
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Anne-Marie
U-Anne-Marie Ungumbungazi ovelele
Indawo yokuhlala enhle esanda kulungiswa ebheke i-rue edumile i-St-Jean-Baptiste, enkabeni yedolobha i-Baie-St-Paul. Ilungele ukuhlala kwezivakashi njengombhangqwana, nabangane noma nomndeni. Kutholwe izinyathelo ezimbalwa ukusuka ezindaweni zokudlela, i-microbrewery, izitolo, amagalari, izitolo zegrosa, amakhemisi, njll. Imizuzu embalwa ngemoto ukusuka esikhungweni sokushushuluza sase-Le Massif. Uzowela ngaphansi kwesipelingi sedolobha ngenkathi ujabulela indawo entsha sha, enomlingisi ofudumele.
Indawo yokuhlala engaphezulu kwendawo yokudlela enconyiwe futhi ethule kakhulu. Akukho makhelwane, indawo enokuthula. Indawo yokuhlala yakhelwe izihambi. Ukufinyelela ku-washer / dryer, isitoreji, ikhishi elifakiwe, indawo yokungena ezimele. Indawo yokupaka yamahhala yonke indawo efulethini. I-balcony yangaphambili ebheke i-rue St-Jean-Baptiste + i-balcony engemuva ebheke ithala elihle lendawo yokudlela i-Le Café des Artistes.
4.81 · 127 okushiwo abanye
IDowntown i-Baie-St-Paul idume ngezindawo zayo zobuciko, indawo yasemaphandleni, izindawo zokudlela ezithokomele kanye namakhefi. Ngaphezu kokuhlala izinyathelo ezimbalwa ukusuka kuzo zonke izinsiza zase-Baie-St-Paul, ungavakashela kalula sonke isifunda sase-Charlevoix, kungakhathaliseki ukuthi uhamba ngezinyawo ezintabeni noma emanzini.
Sizokujabulela ukuphendula imibuzo yakho noma senze iziphakamiso ngombhalo noma nge-imeyili kukho konke ukuhlala kwakho!
UAnne-Marie Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Baie-Saint-Paul namaphethelo